Yaa soo diray diyaaradii siday gar-gaarka caafimaad ee xalay kasoo degtay garoonka Muqdisho? – Banaadir weyne
Yaa soo diray diyaaradii siday gar-gaarka caafimaad ee xalay kasoo degtay garoonka Muqdisho?
Muqdisho – Diyaarad siday qalab caafimaad iyo dawooyin loogu tala-galay ka hor-tagga iyo in lagula tacaalo cudurka Coronavirus ayaa xalay kasoo degtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Diyaaradan ayaa ka timid dalka Itoobiya, waxaana garoonka ku sugayey Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar, Wasiir ku-xigeenka wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada, Maxamed Saciid Cabdullaahi, Safiirka Soomaaliya ee dalka Itoobiya Cabdixakiim Cabdullahi Cumar Camey, kuwaas oo safiirka dowladda Shiinaha ee Soomaaliya Qin Jian, kala wareegay deeqdaas.
Gargaarka ayaa waxaa qayb ka ah qalabka dadka looga baaro cudurka Coronavirus iyo qalabka ay isticmaalaan dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaad iyo goobaha lagu baaro dadka looga shakiyo cudurka Coronavirus ee dunida ku baahay. – Radio Kulmiye